Imeya yeTheku yethembise ngokuthatha izinyathelo ngodlame lwasehostela | News24
Imeya yeTheku yethembise ngokuthatha izinyathelo ngodlame lwasehostela
Durban – Imeya yaseThekwini uZandile Gumede yethembisa ngokuthatha izinyathelo eziqinile ngodlame lwaseGlebelands Hostel eMlazi, kulandela umbiko kaMvikeli woMphakathi.
Uthe umbiko awubeki isithombe esihle ngobuholi babo, waphinde wathi umbiko uphinde ukhumbuze nangezinye zezinto ezadalwa ubandlululo ezisabonakala nanamhlanje, ikakhulukazi emiphakathini ehlukaniswa ubuqembu qembu.
Umbiko kaMvikeli woMphakathi, uBusisiwe Mkhwebane, uthole ukuthi idolobha kanye namaphoyisa behlulekile ukunqanda ubugebengu kule ndawo.
Idolobha linikezwe izinsuku ezingu-30 ukuba lethule uhlelo oluzokwenza umehluko.
OLUNYE UDABA: 'Wavuma' ukuthi wabulala intombi ngoba enzela ibhizinisi lakhe
Umbiko uphinde wathola ukuthi uMnyango wezokuThuthikiswa koMphakathi wenzele phansi izisulu zodlame lwasehostela.
"Sesithathe izinyathelo eziningi ukuxazulula ukubulala ngokwezepolitiki kanye nodlame ikakhulukazi emahostela. Kodwa kuningi okonakele okusadingeka kulungiswe emahostela.”
UZandile Gumede utshele iNews24 ukuthi uzokwenza isiqiniseko sokuthi izincomo zilandelwa ngokoMthethosisekelo.